Kuvulwe inyuvesi entsha iMalcom X yesayensi yezokwelapha nezempilo eChicago - AFRIKHEPRI
Usuke usabela "I-Malcom X University of Science entsha ..." Imizuzwana embalwa edlule
UMeya u-Rahm Emanuel wavula uMalcolm X Medical and University Sciences University. Leyunivesithi idonse imali eyizigidi ze-251 futhi izosebenza njengesikhungo sezinhlelo zezempilo futhi ilungiselele abafundi imisebenzi yezempilo ye-84.000 ezovela esifundeni eminyakeni eyishumi ezayo.
Siguqula imodeli yezemfundo ngokuxhuma izinhlelo zobuchwepheshe ezikhethekile kakhulu nezidingo zabaqashi bethu bendawo, ukudala ibhuloho eliqondile phakathi kwabafundi nemisebenzi yekhulu lama-21, kusho iMeya u-Emanuel. Itholakala eduze kwe-Illinois Medical District, le khampasi entsha izofaka isibhedlela esikhona kanye namakhono kanye namalebhu wokulingisa, kanye nesikhala sezinhlelo ezijwayelekile zokufundisa abantu abadala. INyunivesithi entsha iMalcolm X izoba isizinda sabantu baseChicago ukulungiselela imisebenzi emikhakheni ekhulayo efana nokunakekelwa kwempilo.
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-144!
Chofoza lapha ukuze uthumele i-athikili yakho futhi ...